Umncintiswano Wokuqala Wenoveli Yomdwebo | Izincwadi Zamanje
Umncintiswano wokuqala we-Graphic Novel
Njengoba ungahlola kuwebhusayithi yomshicileli Ngaphandle komqondo, Ngenhloso yokukhuthaza nokukhuthaza ukukhiqizwa kwemibhalo emkhakheni wamahlaya, izinhlelo zeSins Entido neFnac zimemezela Umklomelo Wokuqala Wamazwe Omhlaba Wezithombe, ezinikezwe ama-euro ayi-8.000 ngomsebenzi wokuwina. Isikhathi sokuqala sokulethwa siphela ngoNovemba 30, 2007.
Izisekelo zomncintiswano yilezi ezilandelayo:
1. Bonke ababhali abafisa ukwenza kanjalo, banoma iluphi ubuzwe noma imvelaphi, bangafanelekela ukuthola uMklomelo, inqobo nje uma imisebenzi abayivezayo ihambisana nomqondo ovame ukwamukelwa wamanoveli wokuqhafaza futhi ihlangabezana nezimfuneko ezilandelayo:
• Zibhalwe ngolimi lweSpanishi
• Awashicilelwanga kahle
• Azihambelani nababhali abashona ngaphambi kokumenyezelwa kwale kholi.
• Abazange banikezwe phambilini komunye umncintiswano, noma basalinde isinqumo kunoma imuphi omunye umncintiswano ngosuku lokuphela kwesicelo.
Isimo esizothunyelwa emncintiswaneni singamahlaya, ngefomethi yaso yenoveli. Umbhali ngamunye kufanele athumele isiphakamiso sencwadi esinamakhasi aphansi ayi-16 ubuncane, ubude bawo bokugcina, kowinile, ozoba ngamakhasi angama-96 kuya phambili. Ingalethwa ngombala omnyama nomhlophe noma umbala, kufakwa idosisi enamakhasi ayi-16 aqediwe, nesihloko sawo esihambisanayo, kumakhophi aprintiwe ngefomethi ye-DIN-A4, kanye ne-synopsis eningiliziwe (yamakhasi okungenani ama-2) ngokuqukethwe kwendaba ephelele . Amakhophi athi (umsebenzi wokuqala ngeke wamukelwe, amakhophi kuphela), azohambisana nemininingwane yombhali noma yababhali: Igama, isibongo, ikheli, ucingo, i-imeyili kanye nekhophi ye-ID, ipasipoti noma omunye umazisi.
Okwangempela kuzothunyelwa noma kulethwe, kukhonjiswe kwimvilophu "I International Prize for Graphic Novel Fnac-Sins Entido, ekhelini elilandelayo leposi: Ediciones Sins Entido / calle Válgame Dios, nº 6/28004 Madrid
I-4. Izinsuku zokugcina
Umnqamulajuqu wokwamukelwa kweziphakamiso uzovalwa ngoNovemba 30, 2007. IJaji lizohlangana bese likhipha isinqumo esizokwaziswa ngoJanuwari 2008. Umbhali onqobayo uzozibophezela ukuletha iphrojekthi eqediwe ngesonto eledlule likaJuni 2008. Ukushicilelwa komsebenzi ozowina kuzoba ngo-Okthoba 2008.
Amakhophi anganikwanga azohlala kumshicileli ukuze abanikazi bawo bakwazi ukuwahoxisa kungakapheli izinyanga ezimbili kusukela kushicilelwe isinqumo, kungaba mathupha noma ngemuva kokuthumela ikhuriya, ngemali yabo. Ngemuva kwalesi sikhathi bazohlala beyimpahla yomshicileli, enelungelo lokuzibhubhisa.
IJaji lizokwakhiwa ngochwepheshe bezamasiko, abaqokelwe le nhloso izinhlangano ezithuthukisayo, ezigcina ithuba lokuthi ikomidi lokufunda likhethe kwabokuqala elivezwe njengabaningi bokugcina njengoba libona lifanele.
6. Umklomelo nesinqumo seJury.
Kuzoklonyeliswa umklomelo owodwa futhi ongenakwehlukaniswa wama-euro angama-8.000 (ozokhokhwa ngezigaba ezimbili: ama-50% emali ngokuxhumana kwesinqumo, kanye nama-50% asele ngesikhathi sokushicilelwa). Umsebenzi wokuwina uzoshicilelwa ngu-Ediciones Sins Entido, ozobhekela ezokukhiqiza nokuhlela bese owinile asayine inkontileka nalo mshicileli. Ngasikhathi sinye, okwangempela komsebenzi onqobayo kuzokhonjiswa eFnac, esifundeni sawo semibukiso yezithombe eSpain. Inani lomklomelo lizoncika kumthetho wokugodla imithethonqubo yentela. Isinqumo seJury sizoba sesokugcina, kungenzeka singamenyezelwa njengesingekho futhi sizoklonyeliswa lowo msebenzi walabo abafake lokho ngazwilinye noma, ngokwehluleka lokho, ngokuvotelwa iningi leJury, kuthathwa njengokufanele ukunikezwa.
7. Ukusabalalisa kanye Nokwethulwa Komphakathi.
Umsebenzi wokuwina uzosatshalaliswa yi-Sins Entido, kanti i-Fnac izoqinisekisa ukuqaliswa okukhethekile nokuxhumana komsebenzi owinile kuzo zonke izindawo zayo zokuhweba. Ukwethulwa emphakathini kwalo mklomelo kuzokwenzeka kwesinye seForamu i-Fnac leyo inhlangano eyibona ifanele kakhulu. Iqiniso lokubamba iqhaza emncintiswaneni lisho ukwamukelwa kwezisekelo.
Hhayi-ke ake siye emapenseni sibone ukuthi ngubani othola imali !!
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Umncintiswano wokuqala we-Graphic Novel
uMarta r. kusho
kwenza iminyaka 14
Sawubona, ngifisa ukwazi ukuthi kulo nyaka u-2008 uke wabiza umncintiswano wezithombe ocacile noma ofanayo… ngiyabonga
Phendula kumarta r.
Yebo, iqiniso ukuthi angazi, kepha ngicabanga kanjalo, noma kunjalo, uma uya kuwebhusayithi yomshicileli, ngiyaqiniseka ukuthi ungathola kangcono.
Izindaba zeplanethi zenyanga ka-Agasti
I-XI Cangas Comic Fair